Qorshe cusub ee canshuuraha shirkadaha - BBC Somali
Qorshe cusub ee canshuuraha shirkadaha
Gudiga Midowga Yurub ayaa qaadaysa talaabooyin ay ku kordhinayso siday uga hortagi lahaayeen canshuuraha aan la bixin.
Waxay daabacday dhowr talaabooyin oo ay sheegtay inay ka hortagi doonaan qorshaynta inaan canshuur la bixin, kordhinta daahfurnaan u dhaxaysa waddamada Midowga Yurub iyo sidii loo samayn lahaa tartan xaq ah ee ka dhaxeeya ganacsiga.
Gudiga Midowga Yurub ayaa sheegay in balaayiin dollar oo euro hadda lagu dhumiyo canshuur aan la bixin sanad walba.
Arbacadii, 31 waddamada horay u maray ee ku jira ururka OECD, ayaa saxiixay heshiis la gaaray bishii Oktobar oo sheegaya sharciyo cusub oo lagu joojiyo shirkadaha inay isticmaalaan hab canshuur oo aan la fahmayn, si ay aysan u bixin canshuurta shirakadaha.
Ujeedada waxay tahay in lagu adkeeyo in shirkadaha aysan lacag ku qarin waddamada aan la bixin canshuuraha badan.
Shirkadaha sida Google, Amazon iyo Facebook ayaa hadda laga rabaa inay bixiyaan canshuur waddanka ay faa'iido ka sameeyaan.
Talaabadan ayaa ka danbaysay xanaaq ka yimid dadwaynaha sida aysan qaar ka mid ah shirkadaha waawayn u bixin canshuuraha.
Qoshahan ayaa yimid iyadoo ay jirto dhaleeceeb ka timid shirkadda Google oo heshiis la gashay masuuliyiinta canshuurta ee Britain inay bixiso £130m oo canshuur ah oo aysan bixin tobankii sano ee ugu danbeeyay.
Gudiga Midowga Yurub ayaa sheegay in qorshaha looga hortagayo canshuurta aan la bixin ay sidoo kale ugu baaqayso waddamada Midowga Yurub inay si adag isaga kaashadaan ka hortaga shirkadaha aan bixin canshuuraha saxda ah ee laga doonayo.